Xasan Cabdalle Xasan oo loo doortay duqa Bossaso, ahna guddoomiyaha golaha deegaanka. – Radio Daljir
Xasan Cabdalle Xasan oo loo doortay duqa Bossaso, ahna guddoomiyaha golaha deegaanka.
Agoosto 16, 2011 12:00 b 0
Bossaso, Aug, 16 – Xubnaha golaha deegaanka ee degmada Bossaso ayaa maanta duqa degmada Bossaso ahna guddoomiyaha golaha deegaanka u doortay Xasan Cabdalle xasan, ka dib markii munaasabada doorashada lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada Bossaso.
Lix iyo labaatan ka mid 29-ka xubnood ee uu ka kooban yahay golaha deegaanka ee degmada Bossaso oo maalin ka hor la dhaariyey ayaa u codeeyey duqa cusub, waxaana inta aan la qaadin codka oo gacan taag ahaa tanaasuley halkii musharrax ee kula tartamayey goobta doorashada.
Duqa cusub oo hadlay markii la doortay ka bacdi ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay xilka loo doortay iyo inuu si firfircooni ku jirto xilkaasi u gudan doono, uuna wax ka qaban doono bilicda magaalada iyo waxyaabaha kale ee lama huraanka ah.
Xafladda waxaa goob jog ka ahaa wasiiro iyo xubno kale oo dawladda ka tirsan sida wasiirka arrimaha gudaha, kan amniga, iyo maaliyadda iyo marti sharaf kale.
Baahin: Arbaca, Aug 17, Weriye Jaamac C/raxmaan ~ Daljir ~ Galkacyo. Duqa cusub ee Bossaso oo la wareegay xilka, wax-qabadna ku ballan qaaday; Shirka wadamada Islaamka ee ka socda Istanbul oo lagu gorfaynayo arrimaha Somaliya; C/llahi Xuseen, ku xigeeina safaarada Somaliya ee Qatar oo aan ka waraysanay is-badellada siyaasadeed ee Somaliya.
Baahin: Isniin, Aug 15, Weriye Maxamed C. Kooshin ~ Daljir ~ Garowe. Ciidanka dawlada federaalka ah & Al-shabaab oo dagaal ku dhex maray Ceelgaab, Qooqane & Bacaad ee duleedka Beledweyn, Hiiraan; Amnesty International oo dambiyo dagaal ku eedaysay dawladda federaalka & Al-shabaab; Mudanayaasha golaha deegaanka ee Bossaso oo la dhaariyey.